मेरो जन्मदिनमा हजुरलाई पनि शुभकामना -सतिश चापागाईं | Nepalese Diaspora
मेरो जन्मदिनमा हजुरलाई पनि शुभकामना -सतिश चापागाईं
जन्मदिनको बिहान नेपालमा रहनु भएकी आमालाइ फोन गरें । यो सुन्दर संसार देखाउने आमाप्रति धन्य भएँ । आमाले मसंग सधै एउटा मात्र माग गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ -बेलाबेलामा फोन गरिरहे है बाबु ! मैले मेरो जन्मदिनमा आमालाई त्यसकारण पनि फोन गरें र आमालाई धन्यवाद दिएँ । आमा खुशी हुनुभयो । जानेजतिको आशिर्बाद दिनुभयो । संसारका सबै जननीले जस्तैमृत्युको मुखमा पुगेर उहाँले मलाई जन्म दिनुभएको थियो । र संगै, आमाको शरीरबाट अर्को मान्छे भएर जन्मेको हुँ म । त्यसैले म जन्मनु भनेको आमा पनि फेरी जन्मनु हो । “आमा ! मेरो जन्मदिनमा हजुरलाई पनि शुभकामना ।”
बच्चा दिनको कुरा सम्झन्छु । त्यो बेला जन्मदिन कसरी मनाईयो थाहा भएन। चलनै कम थियो । यति बढी औपचारिकता थिएन, कहिल्यै केक काटिएन । भगवानका जन्मदिनमा नाचियो, खाईयो, बिदा पनि मनाईयो । राजाका जन्मदिनमा स्कुलमा मिठाई खाईयो, छुट्टी मनाईयो । तर बाबु आमाको जन्मदिन पनि हुन्छ, हाम्रो पनि जन्मदिन हुन्छ भन्ने थाहै पाईएन । त्यो ज्ञान अचेल आउदैछ । फागुन ४ गते मेरो जन्मदिन हो तर सानोमा फागुन ७ धेरै मनाईयो प्रजातन्त्र दिवस भनेर । तर म जन्मेको महान दिनलाई अवसर मान्ने सोच किन आएन ? मलाई विश्वास छ- म जन्मेको दिन मेरो लागी आफैमा एक उत्सव रहेछ, एक उत्सव हो। फागुन ७ जस्तै एक दिवस हो । यो दिन अरुका लागि दिन होला मेरा लागी जीवनभर दिवस हुनेछ । म मनाईरहनेछु ।
उमेरको प्रसंग आउदा घरमा तँ यति र उति बर्षको भईस भनेर भन्ने बाहेक जन्मदिनको अर्थ मिलेन। यो कुरा मजस्तै ग्रामिण भेगमा हुर्किएका सबैको कथा हो । म यसलाई कथा भन्छु व्यथा होइन । त्यो समय नै त्यस्तै थियो । आफ्नै जन्मदिन थाहा नभएकी मेरी हजुर आमाले, मेरा बाआमाले मेरो जन्मदिन किन मनाएनन भनेर रोइलो गर्नु ब्यर्थ छ । तर आज समय फरक भएको छ । मेरो बुबा अहिले यो धर्तीमा सशरीर हुनुहुन्न । मैले बोलेको सुन्नुहुन्न । हजुर भएकै कारण म यो धर्तीमा छु । हजुरको रगत मात्र होइन शील, स्वभाव, विचार, भावना र चेत बोकेर बाँचिरहेको छु । समय र सन्दर्भ अनुसार केहि परिवर्तित स्वरुपमा । तर, सारमा भन्दा जसरी हामी एउटा बाँदरको बिकसित रुपमा छौं त्यसरी नै हामी तिनै बाँदरका सन्तति र हाम्रा पुर्खाहरुको लहरो मात्र हौँ । संसारले माने अनुसार हजुरको आत्मा यही संसारमा छ भने हजुरलाई थाहा छ बुबा म हरेक क्षण हजुरप्रति कृतज्ञ छु । यदि संसार गलत रहेछ र हजुरको आत्मा नै रहेनछ भने पनि मैले मेरो अन्तिम सास रहेसम्म सम्झिईरहने छु । स्वर्गीय बुबा ! मेरो जन्मदिनमा हजुरलाई र हजुर मार्फत सबै पितृदेवहरुलाई शुभकामना !
यो पनि पढ्नुहोस : गुल्मीको स्याल कास्कीको जंगलमा -दीपक विश्वकर्मा
मेरो जन्मदिनलाई बिशेष बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका मेरी श्रीमतीजीको हुन्छ । यस्ता कुराको चाँजोपाँजो मेरी जीवन संगिनी नै मिलाउछिन । बिशेषगरी छोरीहरुको र मेरो जन्मदिनमा अनि हाम्रो बिबाह दिवसमा । उनले लेखेर सामाजिक संजालमा पहिल्यै राखिदिन्छिन अनी परिवारका अरु सदस्यहरु र आफन्तहरुको मायाप्रेम पनि थपिदै जान्छ । सबैको फोन र म्यासेज आउछ अनि आफन्तका हार्दिकता मिसिएका शुभकामनाहरु हजारौंको संख्यामा आउछन । परिवारमा जब कसैको जन्मदिन आउँछ धेरै खुशी आउने भनेको छोरीहरुलाई हो । उनीहरु केक र कार्डको चिन्ता गर्छन । सर्प्राइज भन्दै आँखा सन्काई सन्काई कुरा गर्छन, लुकाउछन। भलै मेरो हातमा पर्नेबेलासम्म मलाई लगभग सबै थाहा हुन्छ ! दुईतीन दिन लगाएर हातैले कार्ड बनाउछन । आहा ! कस्तो उमंग र उत्साह । समय र परिस्थितिले ल्याएको यो लोभलाग्दो परिबर्तन भोग्दै गर्दा चुकचुक लाग्छ कि मैले मेरो बुबालाई जीवनमा कहिल्यै जन्मदिनको शुभकामना भन्न पाईन भनेर । बाह्र बर्ष अगाडी मात्र हो बुबा बित्नु भएको तर समय कत्ति धेरै परिबर्तन भयो है । जे होस्, मेरो जन्मदिनलाई सधै बिशेष बनाउने श्रीमती, छोरीहरु र सबै आफन्तजनहरु ! मेरो जन्मदिनमा हजुरहरुलाई पनि शुभकामना ।
जन्मदिन मनाउन पर्छ भनेर यो लेखमा राम्रोसंग मिलाएर लेख्न जानेपनि मनाउने बिषयमा अल्छि र सधै उदासिन हुने गर्थें । म आफै यस्ता कुरामा अलि बेप्रबाह मान्छे पक्कै हो | तर अमेरिकामा आमाको जन्मदिन मनाउदा मिलेको दिब्य खुशीपछि जन्मदिन जसरी पनि मनाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । मेरी आमा अमेरिका आउनु भएको बेलामा उहाँको जन्मदिन मनाउन पाएको मेरी श्रीमती कै कारणले हो । उनले नै आमाको पासपोर्टमा रहेको जन्म मिति हेरेर यो योजना बनाएकी थिईन । त्यसअघी आमाको जन्मदिनको ख्याल न आमा आफैलाई थियो न मलाई ! जीवनमा आफ्नो जन्मदिन पहिलो पटक मनाउदा आमा कम्ता खुशी हुनुभएको थिएन । अमेरिकामा मेरा साथीभाईहरुका बीचमा आफ्नै जन्मदिनको पहिलो गुलियो केक काट्दा आमाका आँखामा नुनिलो पानीको छचल्किएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस : बोर्ड अफ डाइरेक्टर पदका उमेद्वार रामहरी खड्काले के भन्नुहुन्छ ?
हामी बाहिरी दुनियाका बाह्र सत्ताईस कुरा दिमागभरी राखेर हुटिट्याऊँले आकाश थाम्छु भनेजस्तै गर्छौं तर परिवारभित्रको सुखदुखको ख्याल नै गर्दैनौं । पहिला पहिला म यस्ता कुरामा खर्च किन गर्नु भन्थें । मेरी श्रीमती खर्च होइन हर्ष ठुलो कुरा हो भन्छिन । ठुला ठुला पार्टी प्यालेसमा जन्मदिन मनाउन नसकेपनि कहिले आफ्नै साथीहरुका बीचमा र कहिले परिवारको सानो घेरामा पनि मनाउन सकिन्छ । सुख र हर्ष ससाना कुराहरुमा लुकेको हुन्छ । सानो कुरालाई अवसरमा परिणत गर्न जान्नुपनि जीवन जिउने कला र काईदा हो । सुख भनेको किन्ने र खोज्ने कुरा होइन, जे छ त्यसैलाई महशुश गर्ने र त्यसैमा रमाउने कुरा हो । मलाई त अचेल यस्तै पो लाग्न थालेको छ !
एउटा पक्षबाट हेर्यो भने जन्मदिन आफैमा केहि होइन । बस् ! जिन्दगीमा अर्को एउटा बर्ष थपिएको मात्र हो । बच्चाहरु किशोरावस्थातर्फ, किशोरहरु युवावस्थातर्फ, युवाहरु प्रौढ अवस्थातर्फ र प्रौढहरु जीवनको अन्तिम अवस्थातर्फ प्रवेश गरेको मात्र हो । यसमा भुई छोडेर रमाउनु पर्ने केहि कारण छैन तर यसो सोचौं त जिन्दगीमा कति वटा जन्म दिन आउछन ? फेरी सबै जन्मदिन मनाउन सकिदैन पनि । कहिलेकाही घर परिवार र सामाजिक परिवेशका बिबिध कारणले मनाउन सकिदैन मिल्दैन पनि । जतिबेला मिल्छ त्यतिबेला भने मनाउनै पर्छ । त्यसैपनि के भर छ र जिन्दगीको !
म बसेको ठाउँ बाल्टिमोरमा सामुदायिक खुशी मनाउन भेला भएका बेला हिन्दुबुद्ध मन्दिरका साथीहरुले मलाई स्टेजमा बोलाएर ताली बजाएर मेरो जन्मदिनमा मलाई खुशी प्रदान गर्नुभयो । अझै धेरै बाँच्ने कामना गर्नुभयो । उर्जा र प्रेरणा दिनुभयो । साथीभाईहरुको जन्मदिनमा खुशी भईदिने सबै साथीभाईहरु हजुरहरुलाई धेरैधेरै धन्यवाद सहित सामाजिक भावना अझै जुर्मुराओस र हजुरहरुको जन्मदिन पनि यस्तै भब्य होस् शुभकामना ! मैले नेपाली भाषा पढाउने बाल्टिमोरको बिद्यालयका श्याम कार्की, जसले सुटुक्क केक ल्याएर सबै माझ रमाइलो बाताबरण सिर्जना गरिदिनु भयो, हजुरलाई पनि धन्यवाद सहित सधै हजुरको सकारात्मक भावना समाजप्रति यसरी नै पल्लवित भईरहोस, शुभकामना !
सामाजिक संजालले गर्दा सहजता पनि भएको छ । खर्चिलो पनि भएको छैन । कुनै खर्च बिना नै आफुलाई मन परेको वा आदर्श ब्यक्तीलाइ शुभकामना ब्यक्त गर्न पाईएको छ । यो हाम्रो जुनीको अहोभाग्य पनि हो ।
हामीलाई सामाजिक संजालहरुले जन्मदिन बिर्सनै नदिने भए । फेसबुकले त हरेक बर्ष हप्तादिन अगाडी नै खबर गरिदिन्छ, साथीभाईहरुलाई । अझ हामी नेपालीहरुको लागि अंग्रेजी तारिख पश्चिम देशहरुमा भन्दा नेपालमा १२ घण्टा अगाडी शुरु हुने हुँदा जन्मदिनको रौनक दुईदिनसम्म चल्छ । ढिलागरि आउने सन्देशले त अझै तीनचार दिनसम्म जन्मदिनको खुशियाली रहिरहन्छ। मलाई यी दिनहरुमा परिवार, आफन्त र साथीभाईका हजारौं सन्देशहरु बिभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुन्छन । केहि सन्देश त मैले चिन्दै नचिनेका ब्यक्तिहरुका पनि हुन्छन ।अभिभूत हुन्छु । खुशीको सिमा रहदैन । आफैलाई भाग्यमानी ठान्दछु । सबैका सन्देशहरूमा धन्यवादरुपी प्रतिक्रिया लेख्न पनि भ्याउदिन । लेख्दालेख्दै पनि छुट्नुहुन्छ । सबैलाइ एक-एक उत्तर दिन नसकेपनि हजुरहरु सबैको माया सम्झना, प्रार्थना, पुकार र शुभकामनाप्रति अनुग्रहित छु । सबै महशुश गरेको छु ।
साथै, म पनि बेलाबेलामा हजुरहरुका जन्मदिनमा शुभकामनाका सन्देश लेखिपठाउछु । कहिलेकाही भ्याउदिन र सक्दिन । सधैका दिन एकै हुदैनन् । सम्झंदा सम्झदै र लेख्छु भन्दाभन्दै समय घर्किन्छ । नलेखे पनि मनले सम्झिएको हुन्छ, भनिएको हुन्छ । मलाई पनि अरु कतिले लेख्न भ्याउनु भएन होला भन्ने लाग्छ । मलाई सम्झने सबैलाई मैले एकएक गरी सम्झेको हुन्छ । मेरै जन्मदिनको यो अवसरमा हजुरहरु सबैलाई सम्झिन चाहें ।
प्रिय मनहरु! मेरो जन्मदिनमा हजुरहरुले मलाई शुभकामना ब्यक्त गरिरहँदा मेरोतर्फबाट हजुरहरुलाई धन्यवाद सहित शुभकामना !
रामपुर -१० गेझा, पाल्पा
हाल: बाल्टिमोर अमेरिका
पाठशाला संवाद शृंखला: गणतन्त्रका १२ बर्ष - नरहरी आचार्य, गगन थापा, श्याम श्रेष्ठ
शिक्षा र चेतना भए बिभेद आफै हराउछ -शान्ति अर्याल अधिकारी
विदेशका नेपालीहरु पैतालाको धुलो होइनन् -सतिश चापागाईं
अध्यक्ष सुनील साह नेतृत्वको एक बर्ष !
मेरो कोरोना कथा -सतिश चापागाईं
प्रधान सम्पादक सतिश चापागाईं अमेरिकामा सम्मानित
विमानस्थलमा बा ! -सतिश चापागाईं
आमा तिम्रो सम्झनामा -माधुरी चापागाईं भण्डारी
पिताम्बर चापागाई ‘पदमपानी’का तीन मुक्तकहरु
सतिश चापागाईंको नयाँ गीत 'फुटेको छु सिसाजस्तै'…
यदि प्रेममा जात हेरिदैनथ्यो भने -सिमा कान्छु 136 views